Audit | Aung Kan Bo Trading Co.,Ltd ﻿
Company: Aung Kan Bo Trading Co.,Ltd
AUNG KANBO is one of the leading Truck car trading companies in Myanmar with Head Office at Yangon and regional offices in6different Areas. We import new vehicles and parts from China.
•	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည်။
•	ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ရမည်။
•	B.Com (သို့) တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။
•	LCCI - III အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	အသက်(၂၀) မှ (၃၅) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
Work location Pyigyitagon, Mandalay
Company Industry: Account / Audit / Tax Services
Aung Kan Bo Trading Co.,Ltd
68 Days, Full time , Trading
•	စကားပွောပွပွေဈရမညျ။ ဖျောရှစှောဆကျဆံ တတျရမညျ။ •	ခရီးသှားလာနိုငျရမညျ။ ကားမောငျးကြှမျးကငျြ ရမညျ။ •	Truck & Machinery အတှအေ့ကွုံရှိသူဦးစားပေးမညျ။
•	အသကျ(၂၀) မှ (၃၅) နှဈအတှငျးဖွဈရမညျ။ •	ကှနျပြူတာကြှမျးကငျြစှာ အသုံးပွုတတျရမညျ။
80 Days, Full time , Trading
•	နယျခရီးသှားလာနိုငျသူဖွဈရမညျ။ •	မိမိတာဝနျယူရောငျးခပြေးရမညျ့ ပစ်စညျးမြားနှငျ့ပတျသကျသညျ့ Sale Target မြားပွညျ့မှီအောငျဆောငျရှကျရမညျ။ •	လူမှုဆကျဆံရေးကောငျးမှနျ၍ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျနိုငျသူဖွဈရမညျ။ •	...
•	ကှနျပြူတာကြှမျးကငျြစှာ အသုံးပွုတတျရမညျ။
87 Days, Full time , Trading
124 Days, Full time , Trading
•	Can use Accounting Softwares. Advanced computer skills in MS Office •	Good interpersonal skill with ability to relate of employee. •	Excellent organizational, problem-solving, project management and communication skills
•	Good in Microsoft Office and Advance Excel. •	Can use to Accounting Software
•	Analyzin account data and repairing in time •	Financial reporting to Management •	Good interpersonal skill with ability to relate to all levels of employee across all functions.
125 Days, Full time , Trading
•	Support and manage the office for any administrative procedures •	Calculate and monitor about SSB •	Coordinate with Security Guard for safety issue •	Stationary Equipment handling, monitoring and make report •	Can work overtime
•	ယာဉ်မောင်း လိုင်စင် ရှိရမည်။ ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။ •	Truck & Machinery ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
•	နယ်ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	မိမိတာဝန်ယူရောင်းချပေးရမည့် ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် Sale Target များပြည့်မှီအောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Ope ...
142 Days, Full time , Trading
•	စကားပြောပြေပြစ်ရမည်။ ဖော်ရွေစွာဆက်ဆံ တတ်ရမည်။ •	ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။ ကားမောင်းကျွမ်းကျင် ရမည်။ •	Truck & Machinery အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည်။ •	ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ရမည်။
164 Days, Full time , Trading
- မိမိတာဝန်ယူရောင်းချပေးရမည့် ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် Sale Target များပြည့်မှီအောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ - လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Operation Management, Provlem Solving & Leadership Skills အထူးကောင်းမ� ...
- အလုပ်ကြိုးစား၍ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။ - စကားပြောပြေပြစ်ရမည်။ ဖော်ရွေစွာဆက်ဆံ တတ်ရမည်။ - Truck & Machinery အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
- အလုပ်ကြိုးစား၍ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။
Audit Audit & Taxation Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Aung Kan Bo Trading Co.,Ltd Audit & Taxation Jobs Audit & Taxation Jobs Account / Audit / Tax Services Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
George English Training Centre(68)
Geo Asia Industry &Mining Co.,Ltd
Vithey Microfinance Co., Ltd
Auditor (Store Accountant) F (2 Post)
Mandalay Region 142 Days
Credit Auditor (Risk Management)
Digital Internal Auditors
Head Of Fraud And Internal Audit
Bago Region 62 Days